Horjoogayaashu (wali) kuma aysan dhameysan inay soo duulaan shaashadeheena ... aad ayey uga fog yihiin - WAA KU SAMEEYSA
ACCUEIL » kale “Horjoogayaashu wali (wali) kuma aysan dhameysan inay soo duulaan muraayadeheena ... aad uga fog
Spider-Man: Ka fog Guriga waxaa lasii daayay maanta shineemo, filimkiisii ​​ugu horreeyay yaabina si aad ugu guuleysato qolalka mugdiga ah ee ka soo baxa xargaha Rakaabka: Dhamaadka Ayaa - iyadoo la siidaayo nooc cusub oo waqti dheeri ah oo muuqaallo ah - uu garaaci karo rikoorkaPost de James Cameron iyo 2.787.965.087 $ ee dakhliga xafiiska sanduuqa adduunka oo dhan.
Adoo aan lahayn neef qaadasho, xeebaha ugu dambeeya ee MCU (Marvel Taariikhda Caalamka) shaqada qabta - eeg dulucdayada joornaalka kaneecada Toddobaadkan - oo waxay soo bandhigtaa madadaalo daacad ah oo ay si gaar ah uga mahadcelin doonaan dhallinta. Laakiin tani cusub Spider-Man wax cusub ha keenin, mid baa yaaban wax yaabaha u sheegi kara soosaarka dambe ee filimka superheroic. Marvel lode ma wuxuu si tartiib tartiib ah u gabanayaa? Waqtigaan la joogo, uma muuqato inay ka walaacsan tahay istuudiyaha Hollywood ee horey u xaqiijiyay sii deynta ... 14 (!) Majaajillo kale oo ku habboon filimada.
Waa kan liiska waxa ina sugaya sannadaha soo socda:
Exit James McAvoyMichael Fassbender et Jennifer Lawrence. Filimkii xigay ee wareejinta X-Men wuxuu kuu banneyn doonaa magacyada cusub iyo kuwa da 'yar oo ay ku jiraan Anya Taylor-Joy (Split), Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton (Waxyaabaha shisheeye) iyo Henry Zaga (Sababaha 13 Maxaad). Cajiib ah filim loogu yeedhay Mutaalayaasha cusub ("Mutants cusub") oo siidayntiisa loo qorsheeyay 3 Abriil 2020. Baahida loo qabo soo celinta dhacdooyinka qaarkood iyo natiijooyinka jilicsan ee Foosto madow (la Sophie Turner) xafiiska sanduuqa, si kastaba ha noqotee, waxay dhalisay dib u dhacyo dhowr ah siidaynta filimkan iyo xitaa wararka xanta ah ee ah in si toos ah loogu wareejin doono adeegga qulqulka.
Black Carmalka ugu dambeyntiina wuxuu noqonayaa filim solo, wuuna mudan yahay Scarlett Johansson oo ka soo muuqday lix filim oo Marvel ah (oo ka bilaabay Iron Man 2 ee 2010), laakiin yaa waligiis aan ciyaarin doorka hogaamineed. Bishii Marso 2018, jilaagu wuxuu ka sheekeeyay waxa sheekada asalka ah ee Black Widow u ekaan karto: "Waxaan u maleynayaa inay runtii suurta gal tahay in lagu raaxeysto Carmallada sidii qof dumar ah oo sameysa xulashooyin xor ah oo firfircoon nafsadeeda, laga yaabee hal mar noloshiisa. Marwalba fursadaas ma aysan helin.Marka la eego dhacdooyinka ka dhacay Rakaabka: Dhamaanfilimkan waa inuu noqdaa hormuud.
Angelina JolieKumail Nanjiani iyo xiddigihii Badbaadiyaha Richard Madden kuligeen ku hawlan yihiin inay ka ciyaaraan Eternals. Majaajiliistaha, tartan loo yaqaan Celestials (dadka dahabiga ah ee Mas'uuliyiinta Galaxy, Vol. 2) abuuraa daa'im ah, dad bini aadam ah oo aan dhiman karin. Dhulbahanteedu waxay leeyihiin, iyo waxyaabo kale, oo ay leeyihiin awooda duulista, telepathy iyo maareynta arrinta. Iyaga ayaa ka mas'uul ah ilaalinta Dhulka.
Madaxa Shirkadda Marvel Studios, Kevin Feigeayaa horay u xaqiijiyay taas Black Panther 2 wuxuu ahaa mashruuc wadada lagu sii waday. Ryan Coogler ayaa horay u saxeexay si loo qoro oo loo hago taxanaha. Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o iyo xiddigaha kale ee filimka koowaad waxay u badan tahay inay ku mashquulsan yihiin filim labaad. Feige ayaa sidoo kale u sawiray filimo suugaan macquul ah oo leh geesiyaal Black Panther, oo ay ku jirto walaasheeda ka yar T'Challa, Shuri (Letita Wright), iyo dagaal yahanka badass Okoye (Danai Gurira - sawir).
Horumarinta Mas'uuliyiinta Galaxy, Vol. 3 ahaa mid ka badan jilicsan. Filimka waxaa loo qorsheeyay 2020, ilaa Disney soo noqoto James Gunn - yaa sameeyay labadii filim ee ugu horreeyay - ka dib markii uu dib u eegay dhowr ka mid ah odaygiisi Twitter Muujinta aragtida waxoogaa yaraanaya ee haweenka, ragga jinsiga ah iyo dumarka lesbianka ah. Kabtanka ayaa markaa ku taageeray agaasimaha qoraal qoraal ah oo wada jir ah,, sideed bilood ka dib go'aankiisii ​​ugu horreeyay, Disney wuxuu ku dhawaaqay 15 bishii Maarso ee la soo dhaafay inuu dib ula laabto Gunn (oo horey u raali galiyay) filim sameeynta. Filimkii ugu dambeeyay ee saddex geesoodka ah masuulka waxay sii kordhin kartaa ugu yaraan hal isbadal. Muuqaal dib u dhac ah oo ka yimid mugga '2', “Ravagers” oo laga sameeyay Sylvestre StalloneMichelle Yeoh qaar kalena waxay ka hadlaan kulanka koox duug ah oo geesiyaal kala diri. Waxaad arkaysaa iyagoo soo socda Expendables boos?
Marvel si rasmi ah uma xaqiijin sii wadida Doctor qariibsado. laakiin C. Robert Cargillqoraa filimkii ugu horreeyay, iyo agaasimaha Scott Derrickson ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inta lagu gudajiro saadaasha in ay horey u haysteen fikrad iyo baadi goob filim labaad. Waxay kaloo soo jeediyeen Mordo (Chiwetel Ejiofor) door muhiim ah ayey ka ciyaari doontaa taariikhda.
Sony ku dhawaaqay taxanaha ah si Spider-Man: Jiil cusub (Guushii Oscar ee bishii Febraayo ee la soo dhaafay, waxay soo afjartay xukunkii Pixar) xitaa kahor muuqaalkiisii ​​ugu horreeyay. Filimku wuxuu u badan yahay inuu xoogga saaro Miles Morales marka loo eego kuwa kale Spider-Dadkahadda oo uu bartay sida loo maareeyo sawirradiisa. Taageerayaasha sida aadka ah u doonaya Gwen Stacey iyo Penni Parker sidoo kale waa la abaalmarin doonaa. a Lataliyihii-off 100% dhedig ayaa arki doonta maalinta, taas oo Wareegtada-Woman qabsan doona bartamaha dhexe.
Marvel Studios wuxuu muddo dheer ku riyoonayay la qabsashada filim ku saleysan dabeecadda Shang-Chi. Wuxuu noqon doonaa superhero-ga Asia ee ugu horreeyay ee hela filim solo. Marvel wuxuu shaqaaleysiiyay laba filim damacsan mashruucan. Qoraalka shaashadda Dave Callahamoo sidoo kale qoray soo socda ee Naag yaab leh, 1984, et Daniel Cretton (Gobollada Nimcada) ayaa mas'uul ka ah xaqiijinta. Maareynta waxay rajeyneysaa in Shang-Chi ay ku yeelan doonto saameyn dhaqameed sida ugu weyn Black Panther leh bulshada madoow.
Tom Hardy wuxuu jilaa Eddie Brock, oo ah nin uu ku dhacay cudurka symbiote shisheeyaha loo yaqaan Venom. Wuxuu isu rogaa filim geesiyadeed oo ka soo hor jeeda filimka, oo la dagaallamaya reer baadiyaha, Riot. Spider-Man xitaa laguma sheegin filimka. Shaqo ka qaadista dhibcaha ayaa tilmaamaysa tan Venom waxay u badan tahay yeelan doonaan taxane leh Woody Harrelson ciyaaro ciyaar villain ah oo la yiraahdo Carnage. In kasta oo qaabilaad muhiim ah oo qaabilaad ahfilimkii ugu horreeyay wuxuu ahaa guul sanduuq weyn oo xafiiska ah.
Jared Letooo horay u ciyaaray doorka Joker ee xulka ismiidaamin ah (DC lagu qoslo), wuxuu ku biirayaa darajada sare ee Sony si uu u soo xero galiyo Spider-Man. Filimku wuxuu diiradda saari doonaa dabeecada 'vampire Morbius' waxaana hagaya Daniel Espinosa (Guriga Nabdoon, Nolosha).
In kasta oo ay jiraan warar sheegaya in Sony ay ka tagtay filimka (ama xitaa ay u kala qaaday laba filim oo keli ah oo loogu talagalay Silver Sable iyo Black Cat), soo saare ka tirsan Venom Dhawaan ayaa la sheegay in ay wali muhiim tahay, laakiin qoraayaashu waxay dib-u-habeyn ku sameynayeen qoraalka. Faahfaahinta synopsis-kii waa dhif, laakiin Silver Sable, oo ah hoggaamiye kooxeed kooxeed ah, waxay u badan tahay inuu eryaday tuugada Black Cat tuugta - illaa ay xoogagga ku soo biiraan. Filimaanta jaalle-movies sida Thelma & Louise sida dhiirigelinta filimka.
Logan (oo leh Hugh Jackman) ayaa la yaabay qofkasta: filimka mugdiga ah ee mugdiga leh ee ku saabsan superhero 2029 wuxuu helay ammaan iyo magacaabis Oscar oo ah shaashadda ugu fiican. Sidaa darteed maahan wax la yaab leh in Fox wuxuu ka shaqeynayaa seenyo ku taal Laura (Dafne Keen), Gabadha yar ee Logan ka ilaalinaysa filimkan. Laura waxay aasaas ahaan door ka qaadan kartaa doorka Wolverine ee filimada mustaqbalka. Iyada iyo dhibbanayaasha kale ee dhallinta yar ee tijaabada ah waxay matali karaan mustaqbal cusub, mustaqbal aad u badan oo kala duwan filimmada X-Men iyo superheroes guud ahaan.
Ms MarvelMarvel kii ugu horreeyay ee Muslim ah ee geesi ah, ayaa la waafajin doona shaashadda weyn, sida uu sheegay Feige. Kamala Khan, oo ah gabar da 'yar oo metamorphic ah oo dhiirrigeliyay Captain Marvel si uu ula dagaallamo dambiyada, ayaa lagu soo qaatay majaajillada 2014. Filim keli ah oo ku saabsan Muslim-American-superine-geesi ah ayaa tallaabo weyn u noqon kara adduunka oo dhan, welina aad u cad Cad. Brie Larson (Captain Marvel) waxay u badan tahay inuu kaalin muusiko ka ciyaari karo filimka, sida Iron Man oo leh Spider-Man in Ahkhiro.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.moustique.be/24133/les-super-heros-n-ont-toujours-pas-fini-d-envahir-nos-ecrans-loin-de-la
Waxay weydiinayaan waqti xabsi 52 nin ah oo loogu talagalay dembiyada galmada ee 42 ee carruurta yaryar - xnxx
Guinea-Bissau - Umaro Sissoco Embaló: "Ciidamada ECOWAS meel fiican kama meeleeyaan ciidankeenna si ay dalka u sugaan" - JeuneAfrique.com
Oraahda 33 si aad ugu sheegto cunugaaga inuu ka fogaado weerarada walaaca - HEALTH PLUS MAG
Two killed , dozens of suspected cases